warkii.com » Magacyada Lix Ciyaartoy Oo Chelsea Iibinayso Si Ay Lacag Ugu Hesho Kai Havertz
Magacyada Lix Ciyaartoy Oo Chelsea Iibinayso Si Ay Lacag Ugu Hesho Kai Havertz
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa raadinaysa lacag ay kusoo iibsato laacibka da’da yar ee khadka dhexe uga ciyaara Bayer Leverkusen iyo xulka qaranka Germany ee Kai Havertz, kaas oo ay ku loollamayaan naadiyo dhawr ah oo ka mid ah kuwa ugu dhaqaalaha badan Yurub.
Blues oo hore ula soo saxeexatay Hakim Ziyech iyo Timo Werner, waxay u baahan tahay inay lacag u hesho saxeexyada cusub ee ay samaynayso, iyadoo hore ugu bixisay labadan laacib £36 milyan oo Gini iyo £52 milyan oo Gini.
Laakiin damaca Frank Lampard iyo dibu-dhiska uu ku wado Chelsea ayaan wali gaadhin heerkii uu qorshihiisu ahaa, waxaanay diiraddu u saaran tahay Havertz oo qiimihiisu ku dhowaanayo isku-geyn Ziyech iyo Werner.
Mulkiilaha Chelsea ee Roman Abramovic ayaa ku taageeray Lampard inuu soo xero-geliyo ciyaartoyda uu uga baahan yahay si ay kooxdu xili ciyaareedka dambe ugu tartami karto horyaalka Premier League, laakiin waxa uu ka gaws-adaygay inuu bixiyo lacag kale, maadaama uu qasnaddiisa kasoo saaray kharashka ku baxay labada ciyaartoy ee sare.
Havertz oo Bayer Leverkusen ay ku qiimyasya £90 milyan oo Gini ayaa la sheegay in Lampard ay ka go’an tahay inuu keeno Stamford Bridge, waxaanu raadinayaa sidii uu ku heli lahaa lacagta uu kusoo xero-gelinayo.
Sida uu qoray wargeyska Express Sport, tababare Lampard iyo maamulka kooxda waxay isla qaateen inay iibiyaan qaar ka mid ah ciyaartoyda Chelsea ee hadda, si ay u sameeyaan lacagta Kai Havertz.
Marcos Alonso, Michy Batshuai, Tiemoue Bakayoko, Kendy iyo Danny Drinkwater ayuu wargeysku sheegay in la filayo inay Chelsea u iibiso Havertz dartii marka uu furmo suuqa iibka ciyaartoyga ee xagaagan.
Emerson Palmieri oo ay Inter Milan doonayso ayaa ah ciyaartoyga lixaad ee liiskan ku jira, waxaana difaacan bidix lala xidhiidhinayaa Inter Milan.
Chelsea waxa kale oo la sheegay inay doonayso difaaca bidix ee Leicester City ee Ben Chilwell si ay iskugu xoojiso booskaas oo Emerson Palmieri iyo Alonso ay wadaagaan, laakiin haddii Chilwell uu ku adkaado, waxa uu Lampard diiradda saari doonaa Nicolas Tagliafico iyo Alex Telles oo Ajax iyo Porto u kala ciyaara.